TogaHerer: Farxadda Ciidka Saeed Hussein
Farxadda Ciidka Saeed Hussein
Ciidal fidriga:Waa Ciidka Maalinta Muslimiintu dhamaystaan Bisha Ramadaan oo ay soo gebagebeeyaan Soonkii Bisha Ramadaan,waa farxad qofku ku faraxsan yahay Soonkii uu soo gutay oo uu Alle ugu shugri iyo mahadnaqayo inuu ku guuleeyey inuu u guto si wanaagsan oo uu ajar iyo derejo sare Alle ka filayo.
Ciidku waa Maalin qiimo badan oo Illaahay subxaana watacaalaa siiyey Ummadda Muslimiinta ah inay farxaan oo niyadda gashadaan inay abbaalgud fiican heli doonaan.
Maalinta Ciidka waxay Muslimiintu gutaan Salaadda Ciidka markay Qorraxdu soo baxdo ilaa 15 daqiiqo ka dib,Salaadda ka dib waxay is weydaarsadaan isu hambalyayn iyo duco,waxanay soo siyaartaan Ehelada iyo Qoysaska Silatu riximku ka dhexeeyo,sidoo kale Asxaabta iyo Saaxiibbada ,waxay dadku isweydaarsadaan booqashada iyo siyaarooyinka Jiiraanka ooy isa soo salaamaan farxadda Ciidka ooy wadaagaan dareenka farxadeed iyo barakada maalintu leedahay.
Sakada Fidriga:Waxa qof kasta oo Muslin ah oo haysta Quudka maalintaa uu cunayo ha yaraado ama ha weynaado’e ku waajib ah inuu bixiyo Sakada Fidriga taas oo Salaadda horteeda ay tahay in la bixiyo,waana bannaan tahay Maalin ama Laba maalmood ka hor ciidka in la bixin karo sida Culimadu sheegeen.
Fariin khayr leh iga hoo
Farxad weeye manatee
Fariin kalena iga hoo
Fursadi yaanay kaa lumen
Posted by togaherer at 08:44